Ciidamada dalka Burundi oo la eedeeyay - BBC News Somali
Ciidamada dalka Burundi oo la eedeeyay
Image caption Ciidamada ayaa mucaaradka dagaal kula jiray
Ciidamada Burundi ayaa lagu eedeeyay in ay dileen falaago dalkaasi ka jirta, waxa ay dileen 17 ka tirsan falaagadaasi oo is dhiibay bishii January, sida ay u sheegeen dad goobjoogayaal ah.
Haddaba ciidanka Burundi ayaa beeniyay warkan ah inay Dileen niman katirsan falaagada oo is dhiibay sida uu BBCda u sheegay goobjooge taagna halkan dilku ka dhacay waxa uu sheegay in markii nimankan jabhada ahaa gacmaha taageen ee ay is dhiibeen si badhedh ah raasas loogu furay halkaas oo ay ku naf wayeen 17 falaagada ahaa.
Ciidamada Burundi ayaa gabi ahaanba dafiray in dhacadadani , waxayse sheegen inay dileen 95 ka tirsan falaagada oo ay dagaal 5 cisho socday kula jireen meel fog oo ku taal waqooyi galbeed ee Burundi .
Dagaalo ayaa ka soo cusbanayd aan aad u wawenayn dalka Burundi oo immika uun kasoo doogayey dagaalkii sokeeye ee Burundi oo ay hore ugu dhinteen in ka badan saddex boqol oo kun
Lama oga cida ay yahiin falagadu , lakiin dawladu waxay ku eedaynaysaa inay ka tirsan yahiin xisbiyada mucaaridka.
dagaaladan ayaa kusoo beegmaya waqti ay Burndi meel xasasiya marayso iyadoo loo diyaargaroobayo doorshooyinka deegaanka iyo barlamanaka ee bisha MAY halka bisha ku xigtana la qaban doono ta madaxweynaha.
Waxaa laysla dhexmarayaa dalka Burundi in madaxweyne Pierer Nkriziz oo xukunka hayey laga soo bilaabo 2005 kadib markii dagaalkii sokeeye dhamaaday isagoo doorasahdii madaxweynanimada waqtigaa ku guulaystay, uu rabo inuu mar kale isasoo sharaxo.
Sikastaba ha ahatee heshiiskii nabadgelyada iyo distoorkii la saxeexay 2005 tii ayaa dhigayey in madaxweynahu laba jeer uun xukunka hayo, iyadoo dadka qaarna leeyahiin marka dastuurka Burundi laga hadlayo qof waliba siduu doono ayuu u fasirtaa.